Guryaha la Dejiyo Soo Glootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawir la isku rakibay: Galären
Guryaha la Dejiyo Soo Glootiga
Guryaha la dejiyo soo-galootiga
La cusbooneeyay onsdag 2 november 2011 kl 14.45
La daabacay onsdag 2 november 2011 kl 12.37
Aqallada la dejiyo magan-gelyo doonka ee dalka oo dhan waa iney noqdaan kuwo siman oo leh tayo isku mid ah. Middaasina oo ey si wada-jir ah uga wada shaqeeyeen kana soo saareen dhabba-tus la xiriira hayadaha SIS, Swedish Standards Institute iyo hayadda socdaalku.
Heshiiskan ayey sidoo kale si wada-jir ah uga soo wada shaqeeyeen shirkadaha mulkiileyaasha guryaha, hayadaha dawladda, shirkadaha qalabeeynta, ururrada daneeya, ururrada bulshada ee madaxa bannaan iyo degmooyin dhowr ah, sida ku cad war saxaafadeed ey si wadajir ah qoraal ugu soo saareen hayadaha SIS iyo Socdaalku.
Xaaladda iminka lagu jiro ayuu farkhi aad u ballaaran u dhexeeyaa guryaha la dejiyo magan-gelyo doonku, halka aaney hore u jirin tayo laga siman yahay ee la xiriira qalabeeynta guryahaa iyo baahida kala duwan ee dadyowga deegaanka loo siiyo.
- Waa arrin muhiimmad noogu fadhiya in deegaanno ku habboon ey helaan dadyowga magan-gelyo doonka dalkan u yimaada. Waxaannuna iminka gaarney heshiis lagu hagaajin karo sidii mustaqbalka wax looga qaban lahaa, sida ay war-saxaafadeed ku sheegtay Carolina Henjered, ahna madaxa laanta howl-galka ee hayadda socdaalku.